Maamulka Galmudug oo amar adag ka soo saaray Qaadka | KEYDMEDIA ONLINE
Maamulka Galmudug oo amar adag ka soo saaray Qaadka
Maamulka Galmudug ayaa mamnuucay Qaadka dhulka laga soo galiyo degannada Maamulkaas laga billaabo 10-ka bishaan.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Sida ku cad waraaq ka soo baxaday xaafiiska Wasiir ku-xigeynka Wasaaradda Maaliyadda Galmudug, Mukhtaar Cali Cusmaan, laga billaabo, 10-ka bishan Juun, waxaa la joojiyay dhamaan Qaadkii degaannada Maamulkaas laga soo galin jiray dhulka, halka ganacsatada Qaadka diyaaradaha ku keena la faray in ay iska diiwaan galiyaan Wasaaradda Maaliyadda.
Waraaqdaan ka soo baxday xaafiiska Wasiir Mukhtaar, ayaa daba socotay baaq uu isla isagu soo saaray 15-kii bishii hore, kaas oo ganacsatada Qaadka, lagu booriyay in ay Wasaaradda iska diiwaan galiyaan, una diyaar garoobaan bixinta cunshuuraha waajibka ku ah.
“Wasaaradda Maamilyadda Galmudug, dhamaan nuucyadii kala duwanaa ee canshuureed way qaaddaa, qaadka ayaana ugu danbeeyay sababo jiray awgeed, dadka ka ganacsada Qaadka waxa ay ku xirnaayeen Kenya, hadda waxa ay u wareegsadeen Itoobiya, waxaana diyaar u nahay in ay canshuurta aruurinno”, ayuu yiri Mukhtaar Cali.
Sababaha loo mamnuucay Qaadka dhulka laga soo galiyo Galmudug, ayuu ku sheegay in aan la aqoon cid lagala hadlo iyo si loo waafajiyo hannaanka canshuur bixinta, wuxuuna carabka ku dhufatay in ay ganacsatadas ku tunteen sharciga.
Wuxuu xusay haddii la qabto Jaad dhulka ku socda, la waafajin doono sharciga koontarabaanka ee u yaalla Galmudug.